आयल निगमको घाटा | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय आयल निगमको घाटा
on: September 06, 2018 सम्पादकीय
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि भएको तर सरकारले मूल्य संयोजन गर्न नदिएकाले आफू अहिले मासिक ६४ करोडमा घाटामा गएको नेपाल आयल निगमले दाबी गरिरहेको छ । अझ भारतीय आयल कर्पोरेशनले नयाँ मूल्यसूची पठाएपछि निगमको घाटा झनै बढ्ने देखिन्छ । केही वर्षयता नयाँ मूल्यसूची आएपछि त्यसअनुसार स्वचालित रूपमा मूल्य संयोजन गर्ने गरिएको थियो । यसो गर्दा आयल निगमलाई खासै घाटा भएको थिएन । तर, अहिले मूल्य वृद्धि गर्न नपाउँदा आयल निगम घाटामा गएको हो ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य आरोहअवरोह भइरहन्छ । तर, यसबाट बच्न भने निगमले कुनै पनि दीर्घकालीन योजना बनाउन सकेको छैन । घाटा भएको हल्ला गर्ने अनि आपूर्ति कम गर्दै जाने निगमको गलत प्रवृत्ति छ । तेल नपाएर उपभोक्ता आत्तिएपछि मूल्य वृद्धि गर्ने भन्दा अन्य कुनै बलियो समाधान निगमले निकालेको छैन ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेर भन्दा पनि आयल निगमभित्रको अनियमितताका कारण निगम घाटामा गएको हो ।
आयल निगमलाई सुधार गर्न थुप्रै समिति बने, तिनका प्रतिवेदन धूलोमा पुरिएका छन् । घरायसी र व्यापारिक प्रयोजनका लागि दुई रङका सिलिण्डर, जैविक तेल मिसाउने, विद्युत् ऊर्जा बढाएर तेल आयात घटाउनेजस्ता योजना धेरैपटक बने । तिनको कार्यान्वयनका लागि भने पर्याप्त काम भएन । विश्वबजारमा तेलको भाउ ओरालो लाग्दा निगममा बोनस खानका लागि अनेक उपायको खोजी भयो तर समाधान खोजिएन । सामान्यतया, निगम घाटामा जाँदा सुधारका अनेक चर्चा गरिन्छन् । घाटा कम हुन थालेपछि भने यस्ता सुधारका चर्चा सेलाउने गरेका छन् । अहिले पनि आयल निगम त्यस्तै गर्दै छ ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेर भन्दा पनि आयल निगमभित्रको अनियमितताका कारण निगम घाटामा गएको हो । निःशुल्क तेल वितरणका कुपन, कर्मचारीलाई दिइने अनेक शीर्षकका सुविधा, प्राविधिक चुहावटका नाममा हुने तेल चोरी ढुवानी खर्च र अन्य धेरै अनियमितताका कारण निगम घाटामा जानु परेको हो । यही घाटा पनि निगमका कर्मचारीलाई कमाउने माध्यम बन्ने गरेको छ । दुई रङको सिलिण्डर बेच्ने भनेर कार्ड छपाइबापत मात्रै लाखौं अनियमितता भएको थियो । यो चर्चा फेरि पनि उचालिएको छ ।
तेलका सम्बन्धमा सरकारको दोधारे नीति छ । ऊ रणनीतिक महत्त्वको वस्तु हो भनेर यो निजीक्षेत्रलाई आयात र वितरणको जिम्मा दिन चाहँदैन । अर्कोतिर प्रदूषण कर, पूर्वाधार कर, भन्सार शुल्क, सडकमर्मत सम्भार शुल्क आदि अनेक शुल्क लिएर भारतबाट किनिएको मूल्यभन्दा धेरै महँगोमा उपभोक्तालाई तेल विक्री गर्छ । राजनीतिक महत्त्वको वस्तु र जनजीविकासँग जोडिएको वस्तु भनेर मान्ने हो भने अनेक शीर्षकका त्यति धेरै कर किन लगाउनुपर्‍यो ? त्यसैगरी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको बेला कर नलिने र मूल्य घटेको बेला कर लिने गरेर यस्को मूल्य स्थिर गर्न सरकार किन चाहन्न ? यसो गर्दा तेलको मूल्यको किचलो सधैंका लागि समाधान हुन सक्छ ।